अण्डालाई किन 'सुपरफूड' भनिन्छ ? जान्नुहोस्, ४ जबरदस्त फाइदाहरु | अण्डालाई किन 'सुपरफूड' भनिन्छ ? जान्नुहोस्, ४ जबरदस्त फाइदाहरु |
| Thursday 15 October, 2020
अण्डालाई किन ‘सुपरफूड’ भनिन्छ ? जान्नुहोस्, ४ जबरदस्त फाइदाहरु
उज्यालो प्रतिनिधि October 15, 2020 स्वास्थ्य/जीवनशैली
काठमाण्डौ । भनिन्छ कि अन्डामा सबै भन्दा पौष्टिक तत्व हुन्छन् । उमालेको अण्डामा भिटामिन ए, भिटामिन बी-5, भिटामिन बी -१२, फस्फोरस र सेलेनियम हुन्छ। यस बाहेक अण्डा भिटामिन डी, भिटामिन ई, भिटामिन के, भिटामिन बी, क्याल्सियम र जिंक भरपुर मात्रामा पाईन्छ र यसैले यसलाई ‘सुपरफूड’ पनि भनिन्छ ।
यसको सेवनबाट शरीरलाई धेरै फाइदाहरू छन् । डाक्टरहरूले पनि मानिसहरूलाई दैनिक कम्तीमा एउटा अण्डा खाने सल्लाह दिन्छन्। अण्डा सेवनका पाँच जबरदस्त फाइदाको बारेमा जानौं, जुन तपाईंको लागि उपयोगी छ।
ब्लड कोलेस्ट्रोलमा गर्दैन असर
यद्यपि अण्डामा कोलेस्ट्रोलको एक ठूलो मात्रा फेला पर्‍यो तर आश्चर्यजनक रूपमा यसले रगत कोलेस्ट्रोललाई धेरै असर गर्दैन। एउटा रिपोर्टका अनुसार अण्डाहरु खाने ७० प्रतिशत मानिसहरुमा सही कोलेस्ट्रोल हुन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत मानिसहरूले अण्डा खाएर कोलेस्ट्रोलमा केही हदसम्म वृद्धि गर्न सक्दछन्।
मुटु रोगहरुको खतरा कम
डाक्टरहरूका अनुसार जब शरीरमा एलडीएलको स्तर बढ्छ, यसले हृदय रोगहरूको जोखिम बढाउँदछ, तर यसको जोखिम एलडीएलको ठूलो कणहरूले कम गर्दछ। धेरै अध्ययनहरूमा यो पत्ता लागेको छ कि अण्डाले एलडीएलको साना कणहरूलाई ठूला कणहरूमा रूपान्तरण गर्दछ, जसले हृदय रोगहरूको जोखिम कम गर्दछ।
यद्यपि केही अनुसन्धानले यो पनि दावी गरेको छ कि मधुमेह बिरामीहरूले अण्डा खाँदा मुटु रोगको जोखिम बढ्छ।
अण्डा आँखाका लागि पनि फाईदाजनक
अण्डा सेवन आँखाका लागि पनि राम्रो छ किनकि लुटेन र xanthin antioxidants यसमा प्रशस्त पाइन्छ, जसले आँखाको ज्योतिलाई बढावा दिन्छ। यस बाहेक अण्डामा भिटामिन ए पनि पाइन्छ, जुन आँखाका लागि आवश्यक मानिन्छ।
तौल घटाउन पनि सहयोगी
अक्सर मानिसहरूले तौल घटाउन कम क्यालोरी खाना खान्छन्। यस्तो अवस्थामा अण्डा विकल्प हो, किनभने यसलाई खाँदा तुरुन्त भोको हुँदैन, जसका कारण मानिसहरूले कम क्यालोरी आहार लिन्छन्। यसले छिटो तौल कम गर्दछ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न
परिस्थितिको अनुरुप चाडपर्व मनाउन स्वास्थ्यमन्त्री द्वारा अपिल
माइग्रेन हुनु अगावै यी संकेतहरू पहिचान गर्नुहोस्, अन्यथा
कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेला डेंगु संक्रमण ।
हप्तामा यति दिन खानुहोस खुर्सानी, यी रोगहरूको जोखिम
अध्ययन : यस्ता आवाज भएका पुरुष हुन सक्छन
‘मैले हाँसेर नै क्यान्सरलाई जितेको छु’
टन्सिलको हेल्चेक्र्याईले हुनसक्छ मुटुरोग !
World Mental Health Day : यी ६ चीजहरूले